Dowladda Soomaaliya oo maanta lagu wareejiyay deeq kala duwan oo ka timid Turkiga (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Soomaaliya oo maanta lagu wareejiyay deeq kala duwan oo ka timid Turkiga (SAWIRO)
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wareejiyay markab weyn oo sida deeq kala duwan oo ka timid dowladda Turkiga, kaas oo 15-ka bishaan June soo gaaray dekedda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Markabkaasi oo la sheegay inuu 4-tii bishaan kasoo amba-baxay dekedda Tasucu oo ku yaalla gobolka Mersin ee koonfurta dalka Turkiga, ayaa maalintii khamiista ahayd soo gaaray dekedda magaalada Muqdisho.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cilmi Cumar Ceynsane oo deeqdaasi markab lagu wareejiyay ayaa uga mahad-celiyay dowladda Turkiga garab istaaga shacabka Soomaaliyeed iyo deeqdaan ay maanta soo gaarsiiyeen.
Deeqdaan oo ka kooban 13,000 tan oo isugu jira cunto iyo gargaar bini’aadanimo ayaa waxaa soo dirtay dowladda Turkiga, waxaana diyaarinta markabkaan ay iska kaashadeen Bisha Cas ee Turkiga, hay’adda TIKA iyo hay’adda kale ee AFAD.
Dhinaca kale, deeqdan ayaa la sheegay in loo qeybin doono gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadda dalka, isagoona sheegay inay kusoo aaday xilli loo baahnaa.